26 Pazuva iroro+ rwiyo urwu ruchaimbwa+ munyika yaJudha:+ “Tine guta rakasimba.+ Iye anoita kuti masvingo norusvingo runodzivirira zvive ruponeso.+ 2 Vhurai magedhi,+ kuti rudzi rwakarurama ruri kuramba ruchifamba rwakatendeka rupinde.+ 3 Muchachengetedza zvinodiwa zvinonyatsotsigirwa murugare runoramba ruripo,+ nokuti munhu anoitwa kuti avimbe nemi.+ 4 Vimbai naJehovha,+ nguva dzose, nokuti Jah Jehovha iDombo+ rinogara nokusingagumi. 5 “Nokuti aderedza vaya vari kugara kumusoro,+ iro taundi rakakwirira.+ Anorideredza, anorideredza kusvikira paivhu; anoriputsira muguruva.+ 6 Richatsikwa-tsikwa netsoka, idzo tsoka dzomunhu anotambudzika, nhanho dzevakaderera.”+ 7 Kururama+ ndiro gwara romunhu akarurama. Zvamakarurama, muchaita kuti nzira yomunhu akarurama iti chechetere.+ 8 Haiwa Jehovha, chokwadi takatarisira kwamuri, nokuda kwegwara rokutonga kwenyu.+ Mweya yedu yave ichida+ zita renyu nechiyeuchidzo+ chenyu. 9 Ndakakudai nomweya wangu usiku;+ chokwadi, ndinoramba ndichikutsvakai kwazvo nomwoyo wangu uri mukati mangu;+ nokuti, kana paine kutonga kunobva kwamuri nokuda kwenyika,+ vagari vomunyika inobereka vachadzidza kururama.+ 10 Kunyange munhu akaipa akanzwirwa nyasha, haazombodzidzi kururama.+ Achaita zvisina kururama+ munyika yokururama uye haazooni ukuru hwaJehovha.+ 11 Haiwa Jehovha, ruoko rwenyu rwakasimudzwa,+ asi ivo havaruoni.+ Vachaona vonyara+ nokushingaira kwevanhu venyu. Chokwadi, moto+ wakagadzirirwa mhandu dzenyu uchadziparadza. 12 Haiwa Jehovha, muchatonga kuti mutipe rugare,+ nokuti makatiitira mabasa edu ose.+ 13 Haiwa Jehovha Mwari wedu, vamwe vanatenzi kunze kwenyu vakaita sokuti ndivanatenzi vedu.+ Tichataura zita renyu tichibatsirwa nemi chete.+ 14 Ivo vakafa; havazoraramizve.+ Vasina simba vari murufu,+ havazomukizve.+ Naizvozvo makafunga nezvavo kuti muvatsakatise uye muite kuti varege kuzotaurwazve.+ 15 Makawedzera rudzi; haiwa Jehovha, makawedzera rudzi;+ makaita kuti mukudzwe.+ Makawedzera miganhu yose yenyika.+ 16 Haiwa Jehovha, ivo vakafunga nezvenyu pakutambudzika;+ vakanyengetera vachizevezera pamakavaranga.+ 17 Haiwa Jehovha, nokuda kwenyu, takava somukadzi ane pamuviri ava kuda kusununguka, ari kurwadziwa nokusununguka, anoshevedzera ari mumarwadzo okusununguka.+ 18 Takava nepamuviri, takarwadziwa nokusununguka;+ zvinoita sokuti takabereka mhepo. Hapana kuponesa chaiko kwatakaunzira nyika,+ uye vagari vomunyika inobereka havana kuzvarwa.+ 19 “Vakafa venyu vachararama.+ Zvitunha zvedu—zvichamuka.+ Mukai mushevedzere muchifara, imi vagari vari muguruva!+ Nokuti dova+ renyu rakaita sedova rekamuti komumaro,+ uye nyika icharegawo vaya vasina simba vari murufu vachiberekwa.+ 20 “Vanhu vangu endai mupinde mudzimba dzenyu dzomukati, muvhare masuo.+ Vandai kwenguva duku kusvikira kutsamwa kwapfuura.+ 21 Nokuti, tarirai! Jehovha ari kuuya achibva kunzvimbo yake kuzoita kuti mugari womunyika azvidavirire kukanganisa kwaari,+ uye nyika ichabudisa pachena ropa rayo rakateurwa+ uye haizofukidzizve vakaurayiwa vayo.”+